Moments leh saaxiibo 1
Sidee baan u sheegi karnaa waxa aan ku jirnay jiritaankeena ugu dambeeyay? weydiiyay booqde habeenkii kale ka dib muxaadarooyin.
Sida kaliya ee loo sheegi karo waa in sifiican loo ogaadaa sidii aan hore u noloshay u ahaan jirnay. Kuliyadda ay aqoontan ku soo baxdo waa xusuusta, oo amarkeedu sarreeyo. Maqnaanshaha taas, mid kastaa wuxuu sameyn karaa qiyaasid wixii uu markii hore ku jiray waxa uu runtii jecel yahay. Waxa kaliya oo macquul ah in la maleeyo in, haddii aan wax ikhtiyaar ah ku leenahay arrinta, ma dooran karno xaalad ama deegaanno aan ku imaan karno, sida kuwa aan ku habooneyn dhadhankayaga ama horumarka iyo, dhanka kale, haddii Annagu wax ikhtiyaar ah ma lihin, markaa, sharciga xukuma dib-u-noolayntu nama gelinayo shuruudaha aan ku habooneyn horumarka.
Waxaan dareemaynaa inaan u naxariisanahay ama ka soo horjeedno fikradaha qaarkood, jilayaasha, fasallada dadka, noocyada dadka, farshaxannada, xirfadaha, farshaxanka iyo xirfadaha, tanina waxay ina tusaysaa inaan hore ugu shaqeynay ama ka soo horjeednay kuwan. Haddii aan gurigeena ku nool nahay ama si fudud ugu nugul nahay wanaagga ama mujtamaca wanaagsan, taasi waxay muujinaysaa wixii aan horay u soo barannay. Dhul gariir, oo caado u ah inuu si iskiis ah ugu aflagaadeeyo jaranjarada gabowga ama dariiqyada boodhka ah ee dalka, ma dareemayo kalsooni bulshada wanaagsan, shaybaarka kiimikada, ama rostrum. Sidoo kale qofkii ahaa nin firfircoon oo firfircoon, farsamo ahaan ama falsafad ahaan u janjeersaday, ma dareemayo xasillooni iyo fududeyn qorraxda, dhar aan nadiif ahayn, iyo dharka cufan.
Waxaa laga yaabaa inaan si sax ah ula xisaabtano wixii aan ku jirnay noloshii hore mana ahayn hanti ama boos waqtigan xaadirka ah, laakiin waxaan u arkeynaa sida himilooyinkeena, hamigeenna, waxa aan jeclahay, xakameyno hamigeenna, aan u jiidanno waqtiga xaadirka ah.
Ma sheegi karnaa inta jeer ee aynu ku dhalannay ka hor?
Jirka ayaa dhasha jidhkuna wuu dhintaa. Naftu ma dhasho mana dhimato, laakiin waxay ku dhexdhashaa jidhka oo dhasha oo jidhka ka tagta markay dhinto jidhka.
Si aad u ogaatid inta naf ee adduunyada ku qaatay adduunkan, aad uga fiirso tartamada kala duwan ee adduunka hadda jira. Tixgeli damiirka, maskaxda iyo horumarka ruux afrikaan ah, ama South Sea Islander; ka dibna kan Newton, Shakespeare, Plato, Buddha, ama Masiix. Inta u dhaxaysa xagjirkaani waxay kafekeraan fasalada kaladuwan ee horumarka ee aadamuhu soo bandhigo. Intaas ka dib weydii meesha xaggee ah “I” aan ka istaago xagjirnimadaas.
Ka dib marka aad iskucelceliso booska eeg inta "aniga" aan ka bartay waaya-aragnimada nolosha hadda jirta - ninka caadiga ah wax buu bartay wax yar - iyo sida aan "anigu" ugu dhaqmo waxa "waxaan" bartay. Su'aashan xiisaha leh kadib, waxaan laga yaabaa inaan sameysano xoogaa fikrad ah tirada jeer ay tahay inay lagama maarmaan noqoto in lagu noolaado si loo gaaro xitaa gobolka haatan jira.
Ma jiro dariiqa qof keliya u sheegi karo inta jeer ee uu soo noolaa ka hor marka laga reebo aqoonta dhabta ah iyo miyir-qabka sii socda ee waagii hore. Haddii loo sheego wuxuu noolaa laba jeer ama konton kun jeer oo macluumaadku faa iido kama helayo, mana awoodi doono inuu xaqiijiyo marka laga reebo aqoonta ku timid naftiisa. Laakiin sawirka la bixiyay waxaan ku abuuri karnaa xoogaa fikrad ah malaayiin sano oo aan ku qasbanahay inaan gaarno gobolka hada jira.
Miyeynu miyirbannahay inta udhaxeysa reincarnations?
Waxaan nahay. Uma nihin si la mid ah sida aan ku jirno nolosha jidhka. Adduunku waa goobta waxqabadka. Waxaa ku jira ninku nool yahay oo dhaqdhaqaaqo oo fikiro. Dadku waa koox ka kooban ama ka kooban toddobo nin ama mabaadi '. Dhimashadu qaybta ay rabbaanika ah ee bini'aadamka waxay gooni uga soocdaa qaybta weyn ee maaddada, mabaadi'da rabbaaniga ah ama ragga ayaa markaa ku noolaanaysa xaalad ama xaalad lagu go'aamiyay fikirka iyo ficillada nolosha oo dhan. Mabaadiidaani rabbaaniga ah waa maskaxda, nafta, iyo ruuxa, kuwaas oo, leh damacyada sare, ee u gudba xaalad ku habboon nolosha nolosha dunidu go'aamisay. Xaaladdaani kama badnaan karto fikradaha ama fikradaha inta lagu jiro nolosha. Maaddaama mabaadi'daani ay ka go'an yihiin qaybta guud ee maaddada iyagu kama warqabaan xumaanta nolosha. Laakiin waa kuwo miyir qaba, oo ku noolaada himilooyinkii lagu aasaasay xilligii nolosha hadda dhammaaday. Xilligani waa wakhti nasasho ah, oo sida lama huraanka ah u ah horumarka nafsiga sida nasashada habeenkii oo kale waa lagama maarmaan in jidhka iyo maskaxda lagu waafajiyo waxqabadka maalinta soo socota.
Geerida, ka soocidda rabbaaniga iyo mabaadi'da dhimashadu waxay u oggolaaneysaa farxadda nolosha inay ka soo baxdo fikradaha la soo maray. Tani waa xaalad miyir-qab ah oo udhaxeysa reincarnations.
Muxuu yahay aragtida qadiimka ah ee reersarnation ee Adam iyo Eve?
Mar kasta oo su’aashaas la weydiisto aoosophist waxay dhalisay dhoolacadeyn, in kasta oo fikradda Aadan iyo Xaawo ay tahay labada qof ee ugu horreeyay ee aadanaha adduunkan ku nool waxaa lagu muujiyey waxyeelladooda ka soo baxday baaritaanno cilmiya oo casri ah, haddana su’aashu waa mid aad u badan. marar badan ayaa soo baxa.
Ninkii aqoonta fiican leh ayaa mar qudha dhahaya in isbeddello muujinaya sheeko sheekadan sheekaynaysa. Theosophist-ka ayaa oggol tan, laakiin wuxuu dhahay taariikhda hore ee aadanaha ayaa lagu keydiyay khuraafaaddan ama sheekooyinka. Doctrine Doctrine waxay muujineysaa in qoyska bini-aadamka horaantiisii ​​iyo dowladnimadiisii ​​hore aysan ahayn sida ay hada yihiin, oo ay ka koobnaayeen rag iyo dumar, laakiin dhab ahaan ma jirin jinsi. Taasi oo si tartiib tartiib ah horumarka dabiiciga ah labada jinsi ama hermaphroditism, loogu soo saaray qof kasta oo bini aadam ah. Taas oo hadhow dambe loo sameeyay jinsiyo, kaas oo aadanaha waqtigan loo qaybiyo.
Aadan iyo Xaawa macnaheedu maahan hal nin iyo hal haween ah, laakiin waa aadanaha oo dhan. Adiga iyo anigu waxaan nahay Aadan iyo Xaawo. Dib-u-dhalashada Aadan iyo Xaawo waa dib-u-dhalashada nafta aadanaha ee qaybo badan oo kala duwan, dalal badan, iyo jinsiyo badan.
Waa maxay dhererka wakhtiga loo xilsaaray reincarnations, haddii uu jiro wakhti cayiman?
Waxaa la sheegay in muddada u dhaxaysa ubaxyada, ama laga soo bilaabo geerida hal jidh ilaa ay naftu ka sii ambaqaado hoy kale oo dunida ku dhashay, waa shan iyo toban boqol oo sano. Laakiin tani sinaba uma khusayso dadka oo dhan, gaar ahaan kuma khusayso ninka reer galbeedka ah ee firfircoon ee maskax ahaan firfircoon.
Ninkii wanaagsan ee jannada u rajaynaya, oo camal wanaagsan ku sameeya adduunkan isla markaana leh hammi iyo mala awaal, qofkii jannada ku waara, wuxuu heli karaa janno muddo dheer, laakiin waa amaan in la yiraahdo in kanu yahay maaha celceliska ninka maanta jira.
Nolosha adduunku waa goobta waxqabadka ee abuurka lagu beero. Samadu waa xaalad ama xaalad nasasho halkaas oo maskaxdu ka nasato hawsheeda oo ay ka shaqeyso nolosha oo ay tahay in ay mar kale dib ula soo noqoto. Muddada maskaxdu dib u soo jiidanayso waxay kuxirantahay waxa ay nolosha ka qabtay iyo halka ay dhigtay fikirkeeda, waayo meelkastoo fikirka ama hamiga uu yahay meeshaas ama xaalada maskaxdu ku tageyso. Muddada ma aha in lagu cabbiro sannadahaheena, laakiin waa mid ku dhaca awoodda maskaxda ee ku raaxeysiga nashaadka ama nasashada. Daqiiqad hal mar ayaa umuuqata inay tahay weligeed. Daqiiqad kale ayaa u gudubta sidii toosh oo kale. Markaan cabirkeena waqtiga aan ahayn ma aha maalmihii iyo sannadaha soo socda ee tagi kara, laakiin waa awood u samaynta maalmahan ama sannadaha dheer ama gaaban.
Waqtiga waxaa loo qabtay jiritaankeena jannada inta udhaxeysa reincarnations. Mid walbana isagaa doorta. Qof kasta oo bini aadam ahi wuxuu noolaanayaa noloshiisa. Maaddaama midkasta uu si faahfaahsan uga duwan yahay midka kale ma jiro cadeyn qeexan sida waqtiga loo sameyn karo wax kale oo aan ka aheyn in mid walba waqtigiisa ku sameeyo fikradiisa iyo wax qabadkiisa, waana ay dheer tahay ama waa gaaban tahay sida uu isagu sameeyo. Waa suurta gal in qofku uu dib u dhasho wax ka yar hal sano, in kasta oo ay tani tahay wax aan caadi ahayn, ama in lagu kordhiyo muddada kumanaan sano.
Miyaanu bedelin shakhsiyadeena markaan ku laabanno dhulka?
Waxaan sameyneynaa si la mid ah inaan u badalno jaakad dhar ah markii ay fulisay ujeedkeedii oo aan loo baahnayn. Shakhsigu wuxuu ka kooban yahay shey asaasi ah oo lagu soo daray qaab, oo lagu mideeyay mabda'a nolosha, lagu habeeyay loona dallacsiiyey rabitaan, iyada oo wejiyada hoose ee maskaxda ku dhex shaqeynaya iyada oo loo marayo shanta dareen. Tani waa iskudarka aan ugu yeerno shakhsiyadda. Waxay jirtaa oo keliya muddo sannado ah laga bilaabo dhalashada illaa dhimashada; adoo u adeegsanaaya aalad ka shaqeysa oo maanka ku shaqeysa, wuxuu la xiriiraa dunida, oo wuxuu ku soo maraa nolosha dhexdeeda. Markay dhimato, shaqsiyan shaqsiga ayaa loo dhigaa oo wuxuu ku noqdaa walxaha sixirka ee dhulka, biyaha, hawada, iyo dabka, oo laga soo qaatay oo la isku daray. Maskaxda bina aadamka ayaa markaa u gudubta xaaladdeeda nasashada ka dib raaxadii ay ku dhisneyd oo gala shaqsi kale si ay u sii wadato waxbarashadeeda iyo waaya aragnimadeeda adduunka.